8 ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများက Black က Galaxy ကျောက်များ၏အရည်အသွေး Check မှ
8 ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများက Black က Galaxy ကျောက်များ၏အရည်အသွေး Check မှ!
Black ကက Galaxy ကျောက်မျိုးပေါင်းအမျိုးမျိုးနှင့်အတူကျောက်. ဒါကအသစ်တခုဝယ်ဘို့အလွန်ခက်ခဲကျောက်. သငျသညျက Black က Galaxy ကျောက်ကိုဝယ်ခြင်းငှါစီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, သင်ရတဲ့နေသောပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးစစ်ဆေးဘို့ကယ့်ကိုအလွန်အရေးကြီးပါသည်.
ဤသည်ကျောက်အိန္ဒိယတွင်ကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်, နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့လည်းအိန္ဒိယတွင်ပြု. တပိတ်ပင်တားဆီးမှုစစ်ဆေးပြီးနောက်အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်အခြေခံစိတ်ကူးရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ကိုသာကြိုတင်မဲစစ်ဆေးခြင်းသင်ဤကျောက်အတွက်အလိုရှိသောအရည်အသွေးကိုကိုကူညီရှာဖွေနိုင်ပါတယ်.
ဤတွင်ကျနော်တို့စတင်ရန်, အနက်ရောင်ကတော့ galaxy ကျောက်များ၏အရည်အသွေးစစ်ဆေးဖို့ဘယ်လို.
Black ကက Galaxy ကျောက်ပြားများတွင်စစ်ဆေးခြင်းအရည်အသွေး
Black ကက Galaxy ကျောက်၏တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါအရွယ်အစားကိုစစ်ဆေးခြင်း.
ပြားကျပန်းအရွယ်အစားရှိပြီးသောပစ္စည်းများမှာ, က Galaxy ကျောက်အတွက်ရရှိနိုင်ပြား၏အောက်ပါအမျိုးအစားများရှိပါတယ် :
50 x ကတက် CM 140 ကျပန်းတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါတက် CM
65 x ကတက် CM 180 ကျပန်းတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါတက် CM
65-90 စင်တီမီတာ x ကို 240 ကျပန်းတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါတက် CM
150 x ကတက် CM 260 ကျပန်းတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါတက် CM
180 စင်တီမီတာမှ 210 စင်တီမီတာ x ကို 280 သို့ 330 cm Random Slabs
သေးငယ်ပြားအမြဲပိုကြီးနှင့်ကြာကြာပြားထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြောင်း. စံရညျအသှေးပြား၏အထွေထွေအရွယ်အစားဖြစ်ပါသည် 65 x ကတက် CM 180 တန်ပြန်ပြား၌ထစင်တီမီတာနှင့် 180 x ကတက် CM 280 Gangsaw စက်တွေကနေဖြတ်ပြား၌ထ CM.
Black ကက Galaxy ကျောက်၏တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါနှင့်အုပ်ကြွပ်အတွက်ရရှိနိုင်ပါ2စင်တီမီတာနှင့်3စင်တီမီတာအထူ. Multi-ဓါးသေးငယ်တဲ့ရှုးခင်မှာ, အရာက Black က Galaxy ကျောက်၏တန်ပြန်အရွယ်အစားပြားလျှော့ချ, အထွေထွေအထူအပြောင်းအလဲဖြစ်ခဲ့သည်2သို့3ထူအတွက်မီလီမီတာ. တန်ပြန်ပြားယေဘုယျအားဖြင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အတွက်အသုံးပြုနေကြသည်ကတည်းက, ဒါကြောင့်အထူနှင့် ပတ်သက်. ကြီးမားတဲ့ပြဿနာမျှမရှိ. ဒါပေမယ့် Multi-ဓါးရှုးပြီးနောက်, ယင်းအပြောင်းအလဲန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ် 1 မီလီမီတာ. အထူအတွက်အများကြီးအပြောင်းအလဲရှိပါလျှင်, ထို့နောက်စျေးကျသွား.
က Galaxy စံနမူနာအတွက်အပြောင်းအလဲ
အဆိုပါအနက်ရောင်က Galaxy ကျောက်ကတော့ galaxy ပုံစံအတွက်အပြောင်းအလဲနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်အမျိုးမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်, ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး ဤနေရာတွင်က Black က Galaxy ကျောက်ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ. အဆိုပါအငယျဆုံးသောအပြောင်းအလဲဈေးနှုန်းမြင့်မားသွား. ဒါကကိုယ့်ပစ္စည်းအတွက်လိုင်းများစစ်ဆေးနေတူသောနည်းနည်းခက်ခဲသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာကျောက်တစ်နည်းနည်းအပိုအသိပညာလိုအပ်ပါတယ်.
လိုင်းက Black က Galaxy ကျောက်၏စျေးနှုန်းဆုံးဖြတ်ခြင်းအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍ. လိုင်းအများအပြားမျိုးရှိပါတယ်ကတော့ galaxy ပစ္စည်းပေါ်လာ. သငျသညျလိုင်းများ၏အရေအတွက်အားဖြင့်အနက်ရောင်ကတော့ galaxy ကျောက်ရဲ့အရည်အသွေးကိုသိရှိနိုင်ပစ္စည်းပေါ်လာ. ပထမဦးဆုံးအရှေးခယျြမှုပစ္စည်းမဆိုလိုင်းရှိသည်ပါဘူးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအရည်အသွေးကိုပစ္စည်းများပစ္စည်းအတွက်အများအပြားအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်လိုင်းများရှိ.
Bende ပစ္စည်းမဆိုအမျိုးအစားများအတွက်အလွန်ဆိုးရွားများမှာ, အဆိုပါအနက်ရောင်က Galaxy ကျောက်မသာ. Bende ပစ္စည်းဆင်းရဲသားကိုအပြောင်းအလဲနဲ့၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း. သငျသညျတခုစကေးချပြီးအားဖြင့်က Galaxy ကျောက်ထဲမှာကွေးစစျဆေးနိုငျ3ပစ္စည်းများ၏ backside အပေါ်ခြေလျင်.
Black ကက Galaxy ကျောက်ကွက်များအတွက်စစ်ဆေးနေသည်အရည်အသွေး
tiles ယေဘုယျအားဖြင့်အရည်အသွေးကောင်းများ၏အမျိုးအစားစီခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံပင်ကောင်းသောပစ္စည်းများကတော့အုပ်ကြွပ်၏ညာဘက်ထောင့်နှင့်အတူပြဿနာရှိ. အဆိုပါအုပ်ကြွပ်စနစ်တကျမဖြတ်နေတယ်ဆိုရင်, သူတို့ညာဘက်ထောင့်ကပြဿနာရှိစေခြင်းငှါ. ညာဘက်ထောင့်ကပြဿနာပြားအတွက်ကွေးပြဿနာကဲ့သို့ကြီးမား. ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာကိုရှောင်ရှားရန်,, ကျွန်တော်တို့ဟာအလိုအလျှောက်ကို double disc ကိုစက်ပေါ်မှာငါတို့အားလုံးပစ္စည်းများဖြတ်. ဤရွေ့ကားစက် 90 ဒီဂရီထောင့်အောင်မြင်ရန်ကျွန်တော်တို့ကို enable.
က Galaxy ကွက်များ၏အနား chipping ၏ပြဿနာ. chip အုပ်ကြွပ်အနားကနေကအရမ်းရုပ်ဆိုးကြည့်ရှု. ဤပြဿနာကိုကြောင့်ဆင်းရဲသားကိုအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ထုပ်ပိုးမှဖြစ်ပျက်. ကျွန်တော်တို့ဟာအလိုအလျှောက်စက်ပေါ်အုပ်ကြွပ်ဖြတ်အဖြစ်, ထိုသို့သောပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ရပါဘူး, ဆိတ်ကွယ်ရာကနေကျနော်တို့ကထုပ်ပိုးနေစဉ်အတွင်းသေချာအောင်ပြုလုပ်, သင်သည်သင်၏ပစ္စည်းအဟောင်းလက်ခံတစ်ဦးပထမဦးဆုံးအတန်းအစားထုပ်ပိုးပစ္စည်းလက်ခံရရှိကြောင်း. ကျနော်တို့ချောင်အုပ်ကြွပ် load ပါဘူး.
က Galaxy ကျောက်အုပ်ကြွပ်၏ပိုလန်အလိုအလျောက်စက်ပေါ်ပြု, ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ချောမရှိအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ. သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ခုတည်းခေါင်းကိုပွတ်အပေါ်အလွန်ကောင်းသောချောအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်, ထိုအခါမူကားသင်ပစ္စည်းပေါ်မှာရှိသမျှပွန်းစားလျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. တစ်ခုတည်းဦးခေါငျး၏ဖြစ်စဉ်ကို Multi-ခေါင်းကို polishing စက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အလွန်နှေးကွေးနေ.
လိုင်းပစ္စည်းတင်မှဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဖြစ်သည်ကတည်းကက Galaxy အုပ်ကြွပ်လိုင်းများနှင့် ပတ်သက်. ပြဿနာတစ်ခုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. သို့သော်တစ်စုံတစ်ယောက်လျော့နည်းစျေးနှုန်းကတော့ galaxy ကျောက်ရှာဖွေနေမယ်ဆိုရင်, အကယ်စင်စစ်ထိုသူသည်လိုင်းများနှင့်အတူလျော့နည်းချိုပစ္စည်းဝယ်နိုင်, နဂါးငွေ့တန်းအပြောင်းအလဲ, နှင့်မညီမညာဖြစ်နေသောအထူပစ္စည်း.
ကတော့ galaxy ပစ္စည်းအတွက်အခြားမည်သည့်ပြဿနာကိုသင်ရှာတွေ့လိုလျှင်, သငျသညျ info@flodeal.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုရေးသားနိုငျ, ကျနော်တို့ဧကန်အမှန်အသင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုသတိပြုပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မယ်.